Caddaalad-darro awgeed oo xilkii looga qaaday Guddoonkii iyo garsoorayaashii Maxkamada ciidamada Puntland – Puntland Post
Posted on January 12, 2020 January 12, 2020 by Liban Yusuf
Caddaalad-darro awgeed oo xilkii looga qaaday Guddoonkii iyo garsoorayaashii Maxkamada ciidamada Puntland
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa xilka qaadis ku sameeyey Guddoonkii iyo garsoorayaal ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo danbiyada culus ee Puntland.
Madaxweyne Deni ayaa xilkii ka qaaday S/guuto Siciid Abyan Cigaal, Guddoomiyihii maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida iyo danbiyada culus ee Puntland, Guddoomiye ku xigeenkii G/sare Maxamuud Nuur Muuse, Garsoore G/sare Aadan Xuseen Maxamed, Garsoore G/sare Maxamed Aadan Jaamac, Garsoore G/sare Cabdirisaaq Axmed Cali iyo Garsoore G/sare Cabdifitaax Xaaji Aadan.
Madaxweyne Deni ayaa xilka qaadista u cuskaday markii uu arkay cabashooyin taxanaha ah iyo caddaalad-darro ka imanaysa mas’uuliyiinta dowladda qaarkood iyo dadweynaha Puntland, sida uu ku sheegay digreeto ka soo baxday xafiiskiisa.
Sidoo kale Madaxweyne Deni ayaa G/Sare Axmed Cabdi Bootaan si ku meel gaar ah ugu magacaabay Guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida iyo danbiyada culus ee Puntland.
Madaxweynaha Puntland oo haatan ku sugan magaalada Boosaaso ayaa 24 saac ee la soo dhaafay magacaabis iyo xilka qaadis kala duwan sameynayey.
Hoos ka akhriso digreetada xilka-qaadis iyo magacaabida maxkamada ciidamada Puntland
Waxaa G/Sare. Axmed Cabdi Bootaan si ku meel gaar ah loogu magacaabay Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Ciidamada qalabka sida iyo Danbiyada Culus ee Dowladda Puntland.
Waxaa xilka qaadis lagu sameeyey Guddoonka iyo Garsoorayaal ka tirsan Maxkamadda Ciidamada qalabka sida iyo Danbiyada Culus ee Dowladda Puntland, kuwaasi oo kala ah: